(tonga teto avy amin'ny Teny amharika)
Ny fiteny amharika dia fiteny ao amin'ny vondrom-piteny semitika tenenina any Etiopia. Izy io dia fiteny semitika faharoa amin'ny lafin'ny isan'ny mpiteny, eo aorian'ny fiteny arabo. Noho ny politika mikasika ny fiteny talohan'ny fahalatsahan'ny Defg, ampiasain'ny ankabeazan'ny mponina any Etiopia ilay fiteny, ary ny mpiteny azy ireo dia na mampiasa azy amin'ny maha fitenin-dreny na maha fiteny faharoa nianarana na fiteny ampiasaina eny ivelany azy. Any Etiopia, fiteny ampiasaina amin'ny fandraharahana ny fiteny amharika.
Any ivelan'i Etiopia, ny fiteny amharika dia tenenin'ny mponina miisa 2,7 tapitrisa miaina any Ejipta, any Israely, any Jibotia, any Yemen, any Sodàna, na koa any Soeda (tenenin'ny mponina vitsivitsy, matetika avy any Etiopia ny ankabeazan'izy ireo) na any Eritirea ho an'ireo izay mbola niaina tambanin'ny fandraharahana Etiopiana talohan'ny taona 1993.
2 Fanoratana ny Amharika
Fanoratana ny Amharika[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_amharika&oldid=969291"
Voaova farany tamin'ny 13 Martsa 2019 amin'ny 04:19 ity pejy ity.